Ama-FAQs - iHiian Junbao Hydraulic Machchan Co, Ltd.
Kumasampula, isikhathi sokuhola siseduze kwezinsuku eziyi-7. Ngomkhiqizo omningi, isikhathi sokuhola yizinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuthola imali yediphozithi. Izikhathi eziholayo ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozithi yakho, futhi (2) sivunywa kokugcina kwemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu eziholayo zingasebenzi ngomnqamulajuqu wakho, sicela uye phezu kwezidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwanelisa izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
I-30% yediphozithi kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngokumelene nekhophi le-B / L.